Kufanele sifake i-antivirus kumadivayisi wethu we-Android? | Izindaba zamagajethi
Kufanele sifake i-antivirus kumadivayisi wethu we-Android?
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule sishicilele i-athikili lapho sikutshele khona ezinye ze- izizathu ezibaluleke kakhulu zokuthi kungani kungafanele ufake i-RAM ne-optimizer yebhethri kudivayisi yakho yeselula ngohlelo lokusebenza lwe-Android, futhi namuhla sibuyela emthwalweni ngendatshana entsha ehlobene kakhulu, esikholwa ukuthi izokusiza kakhulu futhi izogwema ukungena ezinkingeni kwesinye isikhathi ezinesixazululo esinzima.
Futhi ukuthi namuhla sizozama ukuphendula umbuzo Kufanele sifake i-antivirus kumadivayisi wethu we-Android?. Impendulo ingabonakala ingaxakile, kepha ekujuleni ayisiyo futhi ifana kakhulu naleyo esikukhombise yona ngokwenqaba esikunike kona ukufaka i-RAM ne-optimizer memory memory.
1 Ungakhathazeki, i-Android iphephile
2 Ingabe i-antivirus ilusizo kokuthile?
3 Ungabi yisilima, sebenzisa ingqondo
Ungakhathazeki, i-Android iphephile
Uma sibheka umbiko wakamuva wezokuphepha we-Android, okhishwe yi-Google siyakubona lokho kuphela abasebenzisi abangu-0.15% abalande uhlelo lokusebenza ku-Google Play abatheleleke nge-malware noma ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi ngo-2015. Lapho izinhlelo zokusebenza zilandwe esitolo esisemthethweni sezinhlelo zokusebenza ze-Google zingena endaweni yesehlakalo, amaphesenti akhuphukela ku-0.50%, kungabalulekanga kakhulu futhi.
Ngale mininingwane, singasho ukuthi noma imuphi umsebenzisi osebenzisa idivaysi enohlelo lokusebenza lwe-Android angahlala ngokuthula futhi kuba nzima ukuthola igciwane nge-Google Play. IGoogle yenza konke okusemandleni ukufeza lokhu futhi ukuthi nsuku zonke ibuyekeza inani lezicelo eziyizigidi ezingama-6.000 futhi ayihlaziyi amadivayisi angaphezulu kwezigidi ezingama-400 futhi engaphansi kwama-XNUMX ekufuneni izinhlelo zokusebenza ezine-malware.
Abasebenzisi abaningi bavame ukulanda izinhlelo zokusebenza esizifakile kwi-smartphone noma ithebhulethi yethu nge-Google Play, ngakho-ke akufanele ube nokwesaba noma inkinga. Ngakolunye uhlangothi, uma usebenzisa noma yiziphi izinqolobane zohlelo lokusebenza ezihlala ngaphandle kwe-Google noma ufaka izinhlelo ze -APK ozilanda kusuka noma yikuphi, izinto zishintsha kakhulu.
Ingabe i-antivirus ilusizo kokuthile?
Kusukela kulokho okwazile ukukufunda kuze kufike lapha, ngokuqinisekile ungaziphendulela lo mbuzo ngokwakho. Uma namanje ungenakucacisa, futhiSingasho ngokusobala ukuthi i-antivirus ayilungele okuningi ku-Android, ngaphandle kokusebenzisa izinsiza zedivayisi yakho.
Izinkampani eziningi ezinkulu ezine-antivirus yazo yamakhompyutha, njenge-Nortor, i-Avira noma i-Avast, yethule eyayo i-antivirus yamadivayisi weselula noma amaphilisi ane-Android operating system. Udumo lwayo, futhi kwezinye izimo ukukhathazeka okungenasisekelo kwabasebenzisi ukuthi igciwane lingenise idivayisi yabo, benze lolu hlobo lwesicelo phakathi kokulandwa kakhulu.
Android Akuyona indlela yokusebenza ejwayelekile neyamanje, ngokungafani neWindows, ngokwesibonelo, ukuze idivaysi yethu itheleleke ngegciwane, abasebenzisi ngokwabo kumele kube yibo abenza uhlelo olunonya ngesandla. Lokhu kwenza kube nzima kakhulu ukuthi idivayisi yethu igcine ithelelekile. Njengoba sishilo ngaphambili, uma silanda izinhlelo zokusebenza ku-Google Play, ukuthi sigcina sinegciwane kugajethi yethu kuncishiselwa ekungenzeki nhlobo.
Ukufakwa kwe-antivirus kudivayisi yethu ye-Android ngeke kusisize ngalutho, kepha kuzosebenzisa izinsiza eziningi. Uma futhi sine-1 GB ye-RAM kuphela, izosebenzisa ingxenye enkulu yayo, okwenza ukuthi i-smartphone noma ithebhulethi yethu ihambe kancane. Njengokungathi konke lokhu akwanele, lezi zinhlelo zokusebenza zivame ukuba nemisebenzi eminingi, ngaphezu kwe-antivirus, esalokhu yehlisa ijubane futhi "yonakalisa" igajethi yethu kakhulu.
Ungabi yisilima, sebenzisa ingqondo
Lapho unedivayisi ephathekayo ene-Android operating system, enye yezinto okufanele siyisebenzise cishe nsuku zonke ingqondo. I-Google ibeka esinakho isitolo sohlelo lokusebenza njenge-Google Play lapho kungekho lutho oluswele nokuthi iphesenti eliphezulu kakhulu alisiniki ubungozi. Vele i-Android ivumela noma imuphi umsebenzisi ukuthi afake izinhlelo zokusebenza ezingalandwa esitolo esisemthethweni futhi ezitholakala kwenye indawo, noma lokhu kunganconyiwe, ikakhulukazi uma ungasebenzisi ukuqonda.
Enethiwekhi yamanethiwekhi kunamakhasi amaningi asinikeza izinhlelo zokusebenza, ukuhlola i-WhatsApp yomunye umuntu, ukwenza imali ngaphandle kokulawula noma ukwazi ukuthi ubani obheka iphrofayili yakho ye-Faceboook. Iningi lezinhlelo zokusebenza ezithembisa izinto ezinkulu futhi ezingezona ezingokoqobo azitholakali ukulanda ngeGoogle PLay ngoba ezindlini eziningi ziyimithombo emikhulu ye-malware. Uma sisebenzisa ukuqonda, akufanele sifake noma yiziphi zalezi zinhlelo futhi, ngaphezu kwalokho, ngikholelwa ukuthi akufanele sifake noma yiluphi uhlelo lokusebenza kudivayisi yethu olungalandwa esitolo esisemthethweni se-Android.
Ukubuyela enkingeni esesinayo, ukuba nengqondo evamile singasho ukuthi asiyidingi i-antivirus. Lokhu yinto ngisho ne-Google ethi iyayisebenzisa Adrian Ludwig, Injiniyela Wezokuphepha Oyinhloko we-Android; "Angicabangi ukuthi abasebenzisi abangama-99% badinga inzuzo ye-antivirus. Uma ngenxa yomsebenzi wami ngidinga ukuvikelwa okwengeziwe kungaba nengqondo ukwenza njalo. Kepha umsebenzisi ojwayelekile we-Android udinga ukufaka i-antivirus? Lutho neze ".
Siyakuqinisekisa, kepha uma umuntu onjengoLudwig ekuqinisekisa, ngicabanga ukuthi singalulungisa lolu daba bese simane sitshela nonke nina one-antivuris efakwe kudivayisi yakho enesistimu yokusebenza ye-Android ukuqala ukuphenya ukuthi ungayikhipha kanjani ngokuphelele ngoba akudingekile futhi singasho ukuthi kuyalimaza ngisho. Njengesincomo, kufanele sikutshele ukuthi ngeke kwanele ukwenza ukubuyiselwa okuphelele kwedivayisi ukuqeda noma imuphi umkhondo waleyo gciwane.
Ucabanga ukuthi kunengqondo ukufaka i-antivirus efakwe kudivayisi yakho ye-Android?. Sitshele esikhaleni esibekelwe ukuphawula ngalokhu okuthunyelwe noma ngenye yezingosi zokuxhumana nabantu lapho sikhona lapho sifisa ukuxoxa nawe khona.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Kufanele sifake i-antivirus kumadivayisi wethu we-Android?
Futhi ingabe i-antivurus iyasiza ekulweni nokungena kwangaphandle kumanethiwekhi avulekile noma i-Android nayo iyazixosha lezo zingcindezelo?
Ngokubona kwami ​​uma kunesidingo. Eyamahhala yanele ngoba hhayi i-antivirus kuphela esetshenziselwa izinhlelo zokusebenza futhi uma upheqa noma ulanda amafayela.
Kungenzeka kakhulu ukuthi noma upheqa i-Intanethi noma ulande okuthile, u-0,00000001% kungenzeka ukuthi uthelelekile.
Isipiliyoni sami, ama-Trojans ayi-14 asuswe nge-CM Security. Ngiyavuma ukuthi ngibhekabheka amakhasi wokulanda lapho kukhona i-malware eningi futhi iselula yami idlidlizela ngokweqile ...
UJorge Pedro kusho
ngamafuphi, njengokuhudula imiqondo evela ku-pc, uhlelo lwe-antivirus ku-smart phone lwashesha ngangokunokwenzeka; Ngayo kwafika ezinye izinhlelo zokusebenza, kungaba ukuhlanza umkhondo wezinhlelo zokusebenza okuthiwa "zingcolile", nokulawula ukusetshenziswa kwebhethri. Imishini ayisebenzi kahle futhi angazi noma konke lokhu kufakwa kuhlobene yini nokuhamba kancane kwayo, kodwa lokho, kusukela manje kuqhubeke ngizoqala "ukuhlanza" zonke lezi zinhlelo zokusebenza ezingadingekile, kuyiqiniso. Salu2.
Phendula uJorge Pedro
Lesi yisiphetho esiphakeme semakethe yamaselula ngemuva kokungezwa kwakamuva